Wasaaradda Waxabarashada iyo Tacliinta sare oo furtay Tababar ku saabsan Qiimaynta Buugagta Muqrarka. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ January 29, 2017
29/ Jaanayo/ 2017- Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda Puntland ayaa maanta qabatay Tababar ku saabasan sidii loo dajinlahaa habraaca qiimaynta Buugga isla markana loo qiimayn lahaa buug dhamaystiran iyadoo laga eegayo dhinac kasta.
Tabbarkan ayaa socon doono Mudo Saddex maalmood ah kaas oo dabayaal qoraalka buugaagta manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose/dhexe Puntland.
Waxaa Tababarkan ka soo qayb galay agaasimayaasha Waaxteeda yada kala duwan ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare iyo quburo Waxbarasho oo ka socotay iyo wakiilada Wasaaradda waxbarashada, qeybaha bulsahda iyo hay’adda AET oo taageere dhaqaale ku bixisa mashruucaan Manahajka Waxbarashada.
Madaxa Hay’adda AET Maxamed Cali Waaberi ayaa sheegay barnaamijkaan inuu qeyb ka yahay mashruuc la yiraahdo manahajka Waxbarashada aas aasiga ah oo ay ka taageerayaan Wasaaradda waxbarashada.
Agaasimaha Waaxada Tayeynta iyo tayo dhowrka ahna kormeeraha guud ee Wasaardda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland Cabdulqaadir Yuusuf Nuux oo furay Tabarkan ayaa sheegay dadka ka qeybgalaya Tabbarkan inay saddexda maalin diirada saari doonaan sixitaanka iyo talo ku darista buugagta manhajka, isagoo sheegay sanad dugsiyeedka soo socda in dugsiyada hoose/dhexe lagu dhigidoono buugagta lana hirgalin doono.
Iyadoo diiradana lagu saarayo qiimayn lagu samaynayo buuggaag dhamaystiran sida.
Farta iyo qoraalka Buugga.
Qiimaynta buugga Waxay wax ka taraysa in lagu saxo waxii khladaad ah.
Hoos ka Daawo Sawiardda